दुखद खबर : विवाह गरेको एक महिनामै श्रीमती यसरी दैवको प्यारी बनेपछि, आयो टप्प टिप्यो, लग्यो, मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो,,,,,,,,,,,RiP लेख्नुहोस् मृत्य आत्यमाले शान्ति पाउनेछ) - Gorkhali Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दुखद खबर : विवाह गरेको एक महिनामै श्रीमती यसरी दैवको प्यारी बनेपछि, आयो टप्प टिप्यो, लग्यो, मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो,,,,,,,,,,,RiP लेख्नुहोस् मृत्य आत्यमाले शान्ति पाउनेछ)
काठमाडौं । ‘आयो टप्प टिप्यो, लग्यो, मिति पुग्यो टारेर टर्दैन त्यो…’ हो, कवि लेखनाथ पौडेलको यो सदाबहार कविताले भने झै मृत्यु कसैले टार्न सक्दैन । हरेक प्राणीका लागि सबैभन्दा दुःखद घटना हो मृत्यु । अझ कलकलाउँदो उमेरका, भर्खरै विवाह गरेका र दक्ष व्यक्तिहरुको निधन हुँदा धेरैको आँखाबाट अनायासै आँसु चुहिन्छ ।
हो, एक जना यस्तै नेपालीले विदेशमा ज्यान गुमाएका छन् । एक महिनाअघि मात्रै बिबाह बन्धनमा बाँधिएर जापान पुगेकी पर्साकी ममता मोक्तानको सडक दुर्घटनामा ज्यान गयो । साईकलमा क्याम्पस जान हिडेकी ममतालाई विपरित दिशाबाट आएको गाडीले ठक्कर दिएको थियो । गाडिको ठक्करबाट ममताको घटनास्थलमै ज्यान गयो ।
सन् २०१६ अप्रिलमा अध्ययनको लागि जापना पुगेकी ममताले २०१८ जुन १७ तारिखमा नेपाल आएर नुवाकोट जिल्ला शिवपुरी गाउँपालिकाका राम तामाङसँग वैवाहिक बन्धनमा बाधिएकी थिईन् । उनले लामो प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका थिए । करिब दुई साता अगाडि मात्रै नेपाल आएर धुमधामको साथ विवाह गरेर जापान फर्केकी ममता दम्पत्तीले एक महिने वैवाहिक सम्बन्धलाई समेत राम्ररी सेलिब्रेसन गर्न पाएनन् ।
यद्यपी दैवको खेल भनौ वा आफ्नो भाग्य विवाह बन्धनमा बाँधिएको एक महिना पुग्न नपाउँदै ममताका जीवनसंगी राम एक्लो बनेका छन् । चौतर्फी नयाँ वर्षको उमंग छाँइरहेका बेला रामलाई भने सीता (ममता) ले बिचमै छाडेर गएको असह्य पीडा थोपरिएको छ । उनी अहिले पत्नी वियोगमा विक्षप्त छन् ।
अन्तिम शुभकामना ‘नयाँ वर्षले हाम्रो मायालाई बलियो र हाम्रो सम्बन्धलाई पूर्ण बनाएको छ । आई लभ यू एण्ड आई विस यू द बेष्ट ईयर ह्विच विगेन्स हेप्पी न्यू इयर अल फ्रेण्डस् एण्ड रिलेसनसिप !’ नयाँ वर्ष २०७६ उपलक्ष्यमा ममताले दिएको यो शुभकामना नै उनको जीवनको अन्तिम शुभकामना बन्यो । ममताले आफ्ना श्रीमान राम तामाङलाई बलियो माया र सम्बन्ध पूर्ण भएको भाव प्रकट गरेकी थिईन् ।
सम्बन्धमा पूर्णत दिएकी उनको अन्ततः जीवन नै टुंगियो । नयाँ वर्षको शुभारम्भसँगै उनी भगवानको प्यारी बनेकी छन् । ममताको फेसबुक आज श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरुले भरिएका छन् । उनका श्रीमान रामलाई पनि दुखद घडीमा समवेदन प्रकट भईरहेका छन् । शुभकामनासँगै ममताले फेसबुकमा श्रीमानसँगका रमाईलो गरिरहेका तस्बिर पोष्ट गरेकी थिईन् । अब त्यो उनीहरुको अन्तिम तस्बिरमा मात्र बनेको छ ।
सधै अरुका समाचार बनाउने रामलाई जब…. राम एक कुशल पत्रकारका रुपमा चिनिन्छन् । काठमाडौंको रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट पत्रकारिता पढेका राम सधै अरुका सुख, दुखका समाचार बनाउँदैं आएका थिए ।
सञ्चारमाध्यम मार्फत सधै अरुलाई सूसुचित गराउँदैं आएका राम आज एकाएक आफ्नै मान्छेको दुखद समाचार बनाउन पुगे । जापानमा बसेर पत्रकारिता गर्दै आएका राम सैलुङ अनलाईन लगायतका अनलाईनहरुमा काम गर्दै आएका थिए । उनी नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ जापानका अध्यक्ष पनि हुन् ।
एक अभागी छोरी जसले मलेसिया गएका आफ्नो बाबालाइ बोलाउन पाइन ! बिषालु रक्सिले अधुरो राख्यो परिवारसँग रमाउने सपना ,,,,,,,,,,,,,,RiP लेख्नुहोस् मृत्य आत्यमाले शान्ति पाउनेछ)
दुख,कष्ट,बाधा,अड्चन लगायत अरू धेरै समस्याबाट मुक्त हुन चहानु हुन्छ भने यसो गर्नुहोस
इन्जिनियर बन्न अष्ट्रेलिया गएका सेढाई, रातो बाकसमा फर्कदै…परिवारकाे रूवाबासी
बुद्धको मूर्ति तोडफोड गरेर फरक पर्दैन : मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा
राजधानीका अधिकांश अस्पतालमा भुतको बिगबिगी, भुतले मध्य राती कुरुवा र नर्स को सातो लिएपछी …